Ikamelo Lendlu yase-Sanchez #2 - I-Airbnb
Ikamelo Lendlu yase-Sanchez #2
Akukho ukwamukela okungcono ku-Key West kunokuhlala emcimbini wendawo odumile wasekhaya wase-Sanchez. Leli khaya lakhiwa ngo-1860 's enkabeni yemizana engokomlando ye-Gato ne-Merrero cigar. Ihambisana nokwakhiwa kwasekuqaleni kwe-Dade County pine, futhi itholakala khona e-Duval Street engokomlando, i-Sanchez House iqinisekisiwe ukuthi izohlinzeka ngomoya ongokomlando nokuphila ingxenye ye-Key West izivakashi eziningi ezifuna ukuzizwela. Hlala kuvulandi futhi ujabulele imimoya yokuhweba & i-Ocean Breeze.
Leli kamelo lingelinye kwezintathu futhi liyingqayizivele. Uzoba khona emgwaqweni i-Duval ngenhla kwe-Bakery yangempela yesiFulentshi. Uzoba phakathi enhliziyweni ye-Old Town Key West eduze komnyango we-French Bistro edumile, amabhuloho angu-2 ukusuka eningizimu ye-USA.
Leli Ihhotela Elinelayisense lamagumbi angu-3 elinobhavu ohlanganyelwayo.
Akukho ukwamukela okungcono ku-Key West kunokuhlala emcimbini wendawo odumile wasekhaya wase-Sanchez. Leli khaya lakhiwa ngo-1860 's enkabeni yemizana engokomlando ye-Gato ne-Merrero cigar. Ihambisana nokwakhiwa kwasekuqaleni kwe-Dade County pine, futhi itholakala khona e-Duval Street engokomlando, i-Sanchez House iqinisekisiwe ukuthi izohlinzeka ngomoya ongokomlando nokuphila ingxenye ye-Key West izivakashi eziningi…
4.83 (izibuyekezo ezingu-424)
Kutholakala emabhulokhi amabili ukusuka e-Southernmost point, i-Atlantic Ocean ne-Southernmost beach, lungela ukujabulela i-Key West engcono kakhulu. Ehlelwe ngenhla kwendawo yokubhaka yase-France endaweni ethule kakhulu ye-Duval, leli khaya linikeza okokuzithokozisa kwangempela kwe-Key West.
Ngazalelwa e-Key West futhi umsizi wami kababa u-Dave usehlale lapha iminyaka engu-40 futhi sinxusa ukuthi uxhumane nathi ukuze uthole iseluleko, iziphakamiso nosizo ngenkathi ulapha.